Ulawulo loMgangatho-Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Umvelisi we-Chengdu Zhengxi hydraulic press press uphumeza ngokupheleleyo inkqubo yomgangatho we-ISO9001 kwaye uphumeza ngokungqongqo ukuhlolwa okuthathu kwimveliso, oko kukuthi ukuhlolwa kwezinto eziluhlaza, ukuhlolwa kwenkqubo, kunye nokuhlolwa kwefektri;amanyathelo afana nokuzihlola, ukuhlola okufanayo, kunye nokuhlolwa okukhethekileyo kwamkelwa kwakhona kwinkqubo yokusasazwa kwemveliso ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.Qinisekisa ukuba iimveliso ezingahambelaniyo aziphumi kumzi-mveliso.Lungiselela imveliso ngokungqongqo ngokweemfuno zabasebenzisi kunye nemigangatho efanelekileyo yelizwe, ukubonelela ngeemveliso, kwaye uqinisekise ukuba iimveliso ezibonelelweyo zintsha kwaye zingasetyenziswanga, kwaye zenziwe ngezinto ezifanelekileyo zekrwada kunye nobuchwepheshe obuphambili ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso, iinkcukacha kunye nokusebenza kuyahambelana. iimfuno zabasebenzisi .Impahla iya kuthuthwa ngendlela efanelekileyo, kwaye ukupakishwa nokumakishwa kuya kuhambelana nemigangatho yesizwe kunye neemfuno zabasebenzisi.
Umgaqo-nkqubo woMgangatho, injongo,Ukuzibophelela
Umthengi kuqala;umgangatho kuqala;ulawulo lwenkqubo engqongqo;ukwenza uphawu lweklasi yokuqala.
Izinga lokwaneliseka kwabathengi lifikelela kwi-100%;izinga lokuhanjiswa ngexesha lifikelela kwi-100%;izimvo zabathengi zisetyenzwa kwaye zinikwe impendulo 100%.
Iworkshop yoMveliso yokuQala
1. Inkqubo yomgangatho:Ukuze kulawulwe ngokufanelekileyo izinto ezichaphazela iteknoloji yemveliso, ulawulo kunye nabasebenzi ukukhusela nokuphelisa iimveliso ezingafanelekanga, inkampani iye yaqulunqa uxwebhu lwenkqubo yomgangatho ngendlela ecwangcisiweyo necwangcisiweyo, kwaye isetyenziswe ngokungqongqo ukuqinisekisa ukuqinisekiswa komgangatho Inkqubo iyaqhubeka nokusebenza kakuhle. .
2. Ulawulo loyilo:ukuqinisekisa ukuba uyilo lwemveliso kunye nophuhliso lucwangciswe kwaye lwenziwe ngokwenkqubo yolawulo loyilo ukuqinisekisa ukuba imveliso ihlangabezana nemigangatho yesizwe efanelekileyo kunye neemfuno zabasebenzisi.
3. Ukulawulwa kwamaxwebhu kunye nezixhobo:Ukuze kugcinwe ukugqibelela, ukuchaneka, ukufana kunye nokusebenza kwawo onke amaxwebhu anxulumene nomgangatho kunye nezixhobo zenkampani, kunye nokuthintela ukusetyenziswa kwamaxwebhu angasebenziyo okanye angasebenziyo, inkampani ilawula ngokungqongqo amaxwebhu kunye nezixhobo.
4. Ukuthenga:Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zomgangatho weemveliso zokugqibela zenkampani, inkampani ilawula ngokungqongqo ukuthengwa kwezinto ezikrwada kunye nezincedisayo kunye namalungu angaphandle.Ulawulo olungqongqo kuqinisekiso lwesiqinisekiso somthengisi kunye neenkqubo zokuthenga.
5. Ukuchongwa kwemveliso:Ukuze kuthintelwe izinto ezikrwada kunye nezincedisayo, iinxalenye zangaphandle, iimveliso ezigqityiweyo kunye neemveliso ezigqityiweyo ukuba zingaxutywa kwimveliso kunye nokujikeleza, inkampani iye yachaza indlela yokumakisha iimveliso.Xa iimfuno zokulandeleka zichaziwe, imveliso nganye okanye ibhetshi nganye yeemveliso iya kuchongwa ngokukodwa.
6. Ulawulo lwenkqubo:Inkampani ilawula ngokufanelekileyo inkqubo nganye echaphazela umgangatho wemveliso kwinkqubo yokuvelisa ukuqinisekisa ukuba imveliso yokugqibela ihlangabezana neemfuno ezichaziweyo.
7. Ukuhlolwa novavanyo:Ukuze kuqinisekiswe ukuba ngaba izinto ezahlukeneyo kwinkqubo yokuvelisa ziyahlangabezana neemfuno ezichaziweyo, iimfuno zokuhlola kunye novavanyo zichaziwe, kwaye iirekhodi kufuneka zigcinwe.
A. Ukuhlolwa kokuthenga kunye novavanyo
B. Ukuhlolwa kwenkqubo kunye novavanyo
C. Ukuhlolwa kokugqibela kunye novavanyo
8. Ukulawulwa kokuhlolwa, umlinganiselo kunye nezixhobo zovavanyo:Ukuze kuqinisekiswe ukuchaneka kokuhlolwa kunye nokulinganisa kunye nokuthembeka kwexabiso, kunye nokuhlangabezana neemfuno zemveliso, inkampani ichaza ukuba ukuhlolwa, ukulinganisa kunye nezixhobo zokuvavanya ziya kulawulwa, zihlolwe kwaye zilungiswe ngokuhambelana nemimiselo.
Iworkshop yeMveliso 2 (iLathe enkulu)
1. Ukulawulwa kweemveliso ezingafanelekanga:Ukuze kuthintelwe ukukhululwa, ukusetyenziswa kunye nokuhanjiswa kweemveliso ezingafanelekanga, inkampani inemigaqo engqongqo yokulawula, ukuhlukaniswa kunye nokuphathwa kweemveliso ezingafanelekanga.
2. Amanyathelo okulungisa kunye nokuthintela:Ukuze kupheliswe izinto eziyinyani okanye ezinokuthi zibekho, inkampani iye yalawula ngokungqongqo imilinganiselo yokulungisa kunye nokuthintela.
3. Uthutho, ukugcinwa, ukupakishwa, ukukhuselwa kunye nokuhanjiswa:Ukuze kuqinisekiswe umgangatho wokuthengwa kwamanye amazwe kunye neemveliso ezigqityiweyo, inkampani iye yaqulunqa amaxwebhu angqongqo kunye nenkqubo yokuphatha, ukugcinwa, ukupakishwa, ukukhuselwa kunye nokuhanjiswa, kwaye ilawulwa ngokungqongqo.